Izimpawu eziyi-8 zokuvuvukala ku-urethra. – Noor Health Life
Izimpawu eziyi-8 zokuvuvukala ku-urethra.
Ukuvuvukala kwe-urethra yisifo esibuhlungu kakhulu abantu abaningi abamanqikanqika ukukhuluma ngaso.
Kodwa bewazi yini ukuthi izimpawu zalokhu kuvuvukala noma i-UTI zisobala kakhulu futhi ngokuvamile zingabonakala ngisho nangaphambi kokuqala kwesifo?
INoor Health Life ithi izimpawu zalokhu kuvuvukala zisobala kodwa iningi labantu lizishaya indiva.
Kodwa-ke, uma ufuna ukuxilonga isifo somchamo, kufanele ukhumbule lezi zimpawu.
Ukuvuvukala kwe-urethra kulula ukukugwema
Khuphuka ukuchama njalo
Lolu wuphawu olujwayelekile lwe-UTI lapho uzwa sengathi uchama ngaso sonke isikhathi, ngisho noma usanda kungena endlini yokugezela, ungase uzwe isimo esiphuthumayo mayelana nalokhu okungukuthi hamba ngokushesha.Kuyadingeka njll.
Ukuchama okuncane kakhulu
Uma uya endlini yokugezela awuvamisile ukuchama, uzwa sengathi kufanele wenze okwengeziwe kodwa awukwazi ukukwenza naphezu kwemizamo yakho noma unganelisekile.
Ukuya endlini yokugezela ngesikhathi salokhu kugula kungakwenza ucasuke, ungase ube nomuzwa wokuthi lo msebenzi ubuhlungu kakhulu, ngaphezu kwalokho kungase kube nobuhlungu, kuzo zombili izimo kuwuphawu lokuphazamiseka.
I-UTI ivame ukubangela igazi emchameni, kodwa hhayi kuwo wonke umuntu, njengoba kungase kube nokungaboni kahle.
Iphunga lomchamo libi kakhulu ngenxa yanoma yiluphi uhlobo lwesifo esinyeni.Uma uhlangabezana nanoma yiziphi izimpawu ezingenhla ngokunuka kabi, kungaba yi-UTI.Dlulisa futhi uhlolwe ngokwemiyalelo yakhe.
Izimbangela Ezivamile Zokuvuvukala Kwepheshana Lomchamo
Umbala womchamo ungasho okuningi, kuhlanganise nesifo somzila womchamo. Uma lo mbala ungenye into ngaphandle kophuzi noma obala, kuwuphawu lokukhathazeka. Okubomvu noma okunsundu kuwuphawu lokutheleleka, kodwa qala uhlole ukuthi awuzange yini udle ukudla okubomvana, okusawolintshi noma okubomvu ngombala.
Ukuvuvukala komgudu womchamo empeleni kubangelwa ukutheleleka kwesinye.Kunoma yikuphi, ngenxa yalesi sifo, lapho umzimba ubona ukuthi kukhona okungahambi kahle, uqala ukuvuvukala.Ngezinyathelo zokuzivikela, lawo maseli amhlophe egazi Awabandakanyi, okubangela umuzwa wokukhathala.
Umkhuhlane, phakathi kwezinye izimpawu, ngokuvamile ubonisa ukwanda kokuqina kokuvuvukala emgudwini womchamo kanye nokusabalala kokutheleleka ezinso. Uma unomkhuhlane ongaphezu kuka-101 Fahrenheit noma uzizwa ubanda noma umzimba wakho umanziswa umjuluko lapho ulele ebusuku, kufanele ufune usizo lwezokwelapha ngokushesha Izimbangela Ezivamile Zokuvuvukala Kwepheshana Lomchamo
Ukuvuvukala kwe-urethra kuyisifo esibuhlungu kakhulu futhi abantu abaningi bayangabaza ukukhuluma ngaso.
Kukhona futhi ingozi yokutheleleka kwezinso ngenxa yalokhu kutheleleka noma ukuvuvukala futhi izimpawu zakho ngokuvamile zivela ngendlela yokushisa kakhulu nobuhlungu emchameni, kuyilapho ukulangazelela ukuchama njalo, ukuguquguquka kwebala.Kungase kube nomkhuhlane, okhuphuka ezimweni ezinzima.
Ukopha nomchamo onuka kabi nakho kuyizimpawu.
Uma singelashwa noma singabonwa, lesi sifo singasakazeka sisuka esinyeni siye ezinso futhi sibangele ukuvuvukala kwezinso, okungase kubulale.
Ngendlela, kunezizathu ezithile okunzima ukuzilawula, njengokuguga, abesifazane basengozini enkulu kunamadoda, ukukhulelwa, amatshe ezinso, isifo sikashukela kanye nesifo se-Alzheimer, njll.
Kodwa futhi kukhona imikhuba ethile yokuphila eyandisa ingozi yesifo.
Eqinisweni, ukungahlanzeki kungaholela ekwandeni kwenani lala magciwane, okubuye kwandise ingozi yokuvuvukala komgudu womchamo.
Phuza amanzi amancane
Ucwaningo olwenziwe ngabakwaNoor Health Life luthole ukuthi umkhuba wokuphuza amanzi amaningi wehlisa ingozi yokuvuvukala komgudu womchamo, ikakhulukazi kwabesifazane. Ngokocwaningo, indlela elula nephephile yokugwema lesi sifo esibuhlungu ukuvikela izifo futhi ukuphuza ilitha elilodwa lamanzi ngaphezu kokujwayelekile kuyasiza ekugwemeni lesi sifo. Ngokocwaningo, abesifazane basengozini enkulu yokuthola lesi sifo kunabesilisa, kodwa nabesilisa kufanele bathathe lesi sinyathelo sokuzivikela. Uthe ukuphuza amanzi amaningi kwenza kube lula ukuqeda amagciwane anqwabelana esinyeni futhi angaqoqi okubangela lesi sifo.
Sebenzisa izingubo ezimpintshayo
Ukusetshenziswa njalo kwezingubo ezimpintshayo kungaholela ezifweni ezibuhlungu njengokuvuvukala noma ukungenwa yizifo zomgudu womchamo.Ukusetshenziswa kwezingubo zokugqoka kwandisa ingozi yokuvuvukala komgudu womchamo.
Ngenxa yomsebenzi othile noma ngabe ushibhile noma ngabe isiphi isizathu sonke siwumuntu oyeka ukuchama akusiyo into embi kodwa ngaphandle uma siqala ukwenza kakhulu noma singene kulo mkhuba.Make up Uma umkhuba onjalo uqalwa, ungaholela ezinkingeni ezimbi kakhulu. Ukwenza kanjalo kukhulisa ukukhula kwamagciwane ayingozi, okubuye kwandise ingozi yokuvuvukala komgudu womchamo.
Kukhona indlela ekhethekile yeyeast (VCUG) yokulinganisa umfutho wesinye nesinye ngesikhathi sokuchama ezokhombisa ngokusebenzisa ama-x-ray ukuthi kwenzekani lapho ingane yakho ichama.
Isistimu yomchamo (owesifazane)
I-VCUG imele “ukwandisa i-cysto-retrogram”) okusho ukuchama. I-“Cysto” ingeyesinye. “I-urethro” ingeye-urethra, ishubhu elikhipha umchamo esinyeni. Igama elithi “Gram” lisho isithombe. Ngakho-ke, i-VCUG iyisithombe sokuphuma komchamo kusuka kwesinye nge-urethra.
Ukuhlola kusebenzisa uhlobo olukhethekile lomswakamo olubizwa ngokuthi i-contrast medium ukuze kubonakale kangcono umchamo ku-X-ray.
Lungiselela ingane yakho ukuhlolwa
Zinike isikhathi sokufunda lolu lwazi ngokucophelela futhi uluchazele ingane yakho. Izingane ezikwaziyo ukuthi yini okufanele zilindele mancane amathuba okuba zikhathazeke. Tshela ingane yakho mayelana nokuhlolwa ngamazwi ewaqondayo, kanye namagama asetshenziswa umndeni wakho ukuze uqonde indlela umzimba osebenza ngayo.
Njengengxenye yokuhlolwa, ishubhu elincane elibizwa ngokuthi i-catheter lizofakwa ku-urethra yengane yakho. Kuyoba buhlungu ukufaka i-catheter. Kodwa uma umntanakho ehlala ezolile, kuyoba lula ukugqoka. Ungayifundisa ingane yakho ukuthi yehlise umoya ngokudonsa umoya kakhulu. Cela ingane yakho ukuthi ikopishe amakhandlela osuku lokuzalwa, ivuthele amabhaluni noma ikhulule amabhamuza. Yenza lo msebenzi wokuphefumula ekhaya ngaphambi kokuza esibhedlela.
Intsha ngezinye izikhathi iletha okuthile okunethezekile ukuze ikubambe ngesikhathi sokuhlolwa. Ingane yakho ingaletha ithoyizi likakotini noma ingubo yokulala ekhaya.
Omunye wabazali angaba nengane noma nini ngesikhathi sokuhlolwa. Uma ukhulelwe, ungahlala ekamelweni kuze kufakwe i-catheter. Kodwa kufanele uphume ekamelweni ngesikhathi se-X-reyi yengane.
Udinga ukutshela ingane yakho ukuthi udokotela noma uchwepheshe angakwazi ukuthinta izitho zakhe zangasese ukuze azihlanze futhi afake amashubhu kuzo. Tshela ingane yakho ukuthi uyivumele ukuthi ithinte ngoba ukuhlolwa kuzosiza.
Izivivinyo zizokwenziwa ngochwepheshe ababili
Ochwepheshe bezobuchwepheshe bagxile ekufakweni kwe-catheter nama-X-ray. Kwesinye isikhathi i-radiologist kufanele ibe segunjini ngesikhathi sokuhlolwa. I-radiologist ifunda ama-X-ray.
Isistimu yomchamo (owesilisa)
Uchwepheshe we-X-ray uzolungiselela ingane yakho ukuhlolwa ngokumtshela okuzokwenzeka ngaleso sikhathi. I-radiologist izohlanza indawo lapho ipipi yengane yakho noma i-urethra iya khona. Uchwepheshe uzobe esefaka ishubhu eguquguqukayo endaweni evulekile. I-catheter iyishubhu elide, elincanyana, elithambile, elibushelelezi elidlula ku-urethra liye esinyeni. Ochwepheshe bazochaza lokhu ngaso sonke isikhathi, njengoba benza.
Uma ingane yakho inesimo senhliziyo
Ingane yakho ingase idinge ukuthatha ama-antibiotics ngaphambi kokuhlolwa. Ngokwesibonelo, izingane ezinesifo senhliziyo kudingeka ziphuze ama-antibiotic ngaphambi kokuya kudokotela wamazinyo. I-antibiotic umuthi obulala amagciwane. Uma ingane yakho iwudinga lo muthi, sicela utshele udokotela onikeza ingane yakho i-VCUG. Udokotela uzothola lo muthi ngaphambi kokunikeza ingane yakho i-VCUG.
Ama-VCUG ngokuvamile enziwa esibhedlela
Umfutho ongaphakathi esinyeni kanye ne-urethra ngesikhathi sokuchama utholwa uMnyango Wokuthwebula izithombe. Kuvame ukubizwa ngokuthi umnyango we-X-ray. Uma ungayazi indawo yalo mnyango, thola endaweni yokwamukela abantu abaningi.
Lokhu kuhlola kuthatha imizuzu engama-20 kuya kwengama-30. Ngemva kokuhlolwa kuzodingeka uhlale kule ndawo cishe imizuzu engu-15 kuze kube yilapho imidwebo isilungile.
Lapho ungena eMnyangweni Wezithombe Zokuxilonga, ingane yakho izofakwa egunjini lokushintshela elilodwa, igqoke ingubo yasesibhedlela. Ingane yakho izobe isiyiswa ekamelweni le-X-ray. Umzali oyedwa kuphela ozokwazi ukuhamba nengane.
Uma wena nosana lwakho senisendlini ye-X-ray, uchwepheshe uzokucela ukuthi ukhumule ingane yakho inabukeni lezingubo zangaphansi. Khona-ke ingane yakho izolala etafuleni le-X-ray. Ibhandeshi eliyisivikelo lingafakwa esiswini noma emilenzeni yengane yakho ukuze uqiniseke ukuthi ingane yakho iphephile.
Ikhamera esetafuleni izothatha izithombe. Uchwepheshe uzosebenzisa isikrini sikamabonakude ukuze abone ukuthi kwenzekani ngesikhathi sokuhlolwa.
Lapho uchwepheshe enza ama-X-ray, ingane yakho idinga ukuthula ngangokunokwenzeka ukuze ithole imiphumela engcono kakhulu. Ungakwazi ukubamba izandla zengane yakho kancane uze ufike esifubeni sakho ukuze ukwazi ukuphazamisa ingane kunoma iyiphi indlela. Isibonelo, ungacula inkondlo noma iculo.
Uchwepheshe we-X-ray uzoqala ukuhlola ngokususa izindawo ezifihliwe zengane yakho futhi afake ishubhu. I-catheter izokhipha esinyeni iyodwa.
I-catheter izobe ixhunywe ebhodleleni elinomshini wokuqhathanisa. Lokhu kuqhathanisa kuzogeleza ngeshubhu eliphakathi liye esinyeni. Lokhu kuzovumela uchwepheshe ukuthi abone kangcono ngaphakathi kwesinye kanye ne-urethra. Ingane yakho izokwazi ukuzwa umehluko njengoba idlula esinyeni. Kungase kuzwakale kubanda kodwa ngeke kubuhlungu.
Uchwepheshe we-X-ray uzothatha amanye ama-X-reyi lapho i-contrast medium igeleza ngaphakathi esinyeni. Lapho isinye sengane yakho sigcwele, ingane yakho izocelwa ukuba ichamele epanini lombhede noma inabukeni. I-catheter izophuma kalula ngokushesha nje lapho ingane yakho ichama. Uchwepheshe uzothatha ama-X-ray ngenkathi ingane yakho ichama. Lezi izithombe ezibaluleke kakhulu zokuhlolwa.
Ochwepheshe be-X-ray bazokutshela ukuthi ungafika kanjani ekamelweni lokushintshela ukuze umntwana agqoke izingubo zakhe. Bese uhlala egunjini lokulinda. Ngemva kokuhlola imidwebo ye-X-ray, uchwepheshe uzokutshela ukuthi ungahamba nini.
Uma unesikhathi sokubonana nodokotela ngemva kokuhlolwa, tshela uchwepheshe wezobuchwepheshe. Bazoqinisekisa ukuthi imiphumela yakho ithunyelwa emtholampilo. Uma ungaboni udokotela ngemva kokuhlolwa, imiphumela izothunyelwa kudokotela wengane yakho lingakapheli isonto.
Nika ingane yakho uketshezi oluningi ekhaya
Esikhathini esithile ngemva kokuhlolwa, ingane yakho ingase izizwe ingakhululekile, njengokuzwa ukushisa lapho ichama. Nikeza ingane yakho uketshezi oluningi ukuze iphuze ngosuku olulandelayo noma ezimbili, njengamanzi noma ijusi yama-apula. Ukuphuza utshwala kuzosiza ingane yakho uma inezinkinga.
Uma unanoma yimiphi imibuzo mayelana nemiphumela ye-QuoteTest, sicela uthintane ne-Technologist. Uma ingane yakho ingaphumuli isikhathi esingaphezu kwamahora angu-24, shayela udokotela wakho womndeni.
(VCUG) ukuhlola okusebenzisa ama-x-reyi ukuthola ukuthi kwenzekani lapho ingane yakho ichama.
Ngesikhathi sokuhlolwa, umntwana uzofakwa i-urethra ku-urethra yakhe.
Ukuhlolwa kungaba buhlungu. Ungathola ingane yakho ukuthi iphumule ngangokunokwenzeka ekhaya ngaphambi kokuhlolwa, njengokuzivocavoca umzimba. Ungathintana noNoor Health Life nge-imeyili kanye ne-WhatsApp ukuze uthole eminye imibuzo nezimpendulo. noormedlife@gmail.com